Omunye wemithombo eyinhloko yamandla ezikhungweni zokuphehla amaseli kukhona triglyceride. Kuyini lokhu? Lokhu okunye glycerol udle ukudla. Bekanye cholesterol kuyinto into is angumtfombo amafutha.
Triglyceride: lokho oyikho nalokho indima yabo yomzimba womuntu?
Triglyceride zimumethe ngobuningi ijwabu amafutha emzimbeni womuntu. Bekanye ukudla bondliwa kilojoule ngokweqile iguqulwe kusukela fat triglyceride. Lezi izinto kanye nanoma yimuphi omunye amafutha, zingaxazululeki ketshezi, basuke njalo lizungezwe phospholipids namaprotheni, udala igobolondo (Esilula) ngalo triglyceride kuthiwa zithutha ngokukhululekile wonke umzimba. Lezi izinto zingase zimiswe kusuka emithonjeni ehlukahlukene energy: amaprotheni, fat kanye carbohydrate.
Ngaphandle fat umzimba ayikwazi ukusebenza kahle. Nokho, ukunqwabelana yabo ingase iphenduke ibe usongo nempilo yabantu kanye kuholela:
ezingamahlalakhona ukwehluleka kwezinso;
ukuluthwa utshwala noma ukuzincisha ukudla.
Amazinga Igazi triglyceride kumele singeqi 150 mg / dl. Inani izinto ezithinta iminyaka yobudala bomuntu kanye nendlela yokuphila. Okungukuthi, zingenzi lutho olunyakazisa umzimba, ukudla kakhulu, imikhuba emibi. Ukuze sithole Inkomba efana udinga ukuthatha ukuhlolwa igazi. Triglyceride, ngokusekelwe imiphumela izifundo laboratory lingavuswa noma sehliselwe. Futhi ngowokuqala futhi esimweni sesibili singaxoxa mayelana nokuthuthukiswa yisiphi isifo.
triglyceride ephakeme: loku kusho kutsini?
Inkomba High kubonisa umzimba syndrome, ekuhlanganiseni izici ezifana okusezingeni eliphezulu likashukela egazini, okusezingeni eliphezulu blood pressure, insulin. Futhi ukwandisa inani triglyceride kungase kube nomthelela ngokuphuza imithi ethile (zokuvimbela inzalo temlomo, isisu, beta-blocker, ama). Ngenxa ukushintsha kwama-hormone emzimbeni ukwandisa izinto wabonisa futhi kubantu besifazane abakhulelwe.
Uma triglyceride zehliswa, kusho ukuthini?
okuqukethwe encishisiwe kungase kubonise khona noma ukuthuthukiswa nenselelo yalezo zifo ezibucayi:
overabundance kavithamini C.
Indlela eyinhloko nokugcina ezingeni ejwayelekile triglyceride egazini lo mkhosi izimiso ukudla okunempilo. Uma ukudla okuvamile nge 40% amafutha okuqukethwe idatha inkomba izinto yanda, isidingo abawaphuzayo fat-30%. Uma lokhu kungasebenzi, bese kancane kancane inani amafutha ekudleni kuyehla kube 20%. Nokho, lokhu Ukudla kufanele udokotela, ongayikuvuma ngokuqhubekayo uqaphele impilo lesiguli. Ngaphezu kwalokho, ngenxa ukuzinza amazinga triglyceride kuyadingeka ukuyeka ukubhema futhi utshwala, kanye zithobele imithetho ngendlela enempilo.
Triglyceride: Kuyini-ke futhi yiziphi imisebenzi yabo? Izimpendulo zale mibuzo ngeke ngemva kokufunda lesi sihloko, uyazi.
Usayizi elikhulu ukhalo, nokukhulelwa kanye nokubeletha